इंग्ल्याण्डबिरुद्ध अष्ट्रेलियाको फितलो प्रदर्शन , दियो मा २२४ रनको लक्ष्य ! जित कस्को ? – Nepal Trending
इंग्ल्याण्डबिरुद्ध अष्ट्रेलियाको फितलो प्रदर्शन , दियो मा २२४ रनको लक्ष्य ! जित कस्को ?
On २६ असार २०७६, बिहीबार १९:२३
आइसीसी विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलियाले इंग्ल्याण्डलाई २२४ रनको लक्ष्य दिएको छ। अस्ट्रेलिया १ ओभर बाँकी छँदै २२३ रनमा अल आउट भयो। अस्ट्रेलियाका लागि तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका स्टेभन स्मिथले ८९ रन बनाएपछि अस्ट्रेलियाले २ सय रनको आंकडा पार गरेका हो।
टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाको शुरुआत भने निकै खराब रहेको थियो। शुरुका तीन विकेट गुमाउँदा १४ रनमात्रै जोडेको अस्ट्रेलियाको इनिङ्स स्मिथ र एलेक्स केरीले उकासेका थिए। यी दुईले चौथो विकेटका लागि १०३ रनको साझेदारी गर्दै टिमको स्कोर ११७ पुर्‍याए। केरीले ४६ रन बनाए भने ग्लेन म्याक्सवेलले २२ रन र मिचले स्टार्कले २९ रनको योगदान गरे।
बाँकी खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन्। इंग्ल्याण्डका अदिल रसिद र क्रिस वोक्स्ले तीन तीन विकेट लिँदा जोफ्रा आर्चरले २ विकेट लिए। आजको विजेताले आइतबार न्यूजिल्याण्डसँग उपाधि भिडन्त गर्ने छ।
अस्ट्रेलिया : एरॉन फिंच (कप्तान), जेसन बेहरनडार्फ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन कल्टर नाइल, पैट कमिंस, मैथ्यू वेड, नाथन लॉयन, पीटर हैंड्सकॉम्ब, ग्लैन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वार्नर, एडम जाम्पा.